Ini handibhadharwe mutero. Nzira yekudzivirira mutero wekutengesa mune yangu odha? - DataNumen
Tinoshandisa MyCommerce.com uye FastSpring.com kubata edu online transaction.
Kana iwe ukaraira kuburikidza neMyCommerce.com, saka unofanirwa kubhadhara mutero wekutengesa mune yako odha kutanga. Zvino mushure mekunge hurongwa hwabvumidzwa, tumira gwaro rako rekuregererwa mutero kana reVAT kana GST ID inoshanda kwatiri, ipapo isu tinodzosera iwe mutero iwe.
Kana iwe ukaraira kuburikidza FastSpring.com, ipapo unogona dzivirira mitero kubva kuunganidzwe pane yako odha nekupa yako inoshanda VAT kana GST ID panguva yekutenga. Iyo VAT kana GST ID munda inogona kana inogona kunge isingawanikwe zvichienderana nenyika yako. Nyika dzinobva kuAmerica hadzina iyo VAT / GST ID munda sezvo isingashande:
Ipapo nyika dzinobva kuEurope kana Asia dzichava neVAT / GST ID munda, senge pazasi.
Iwe unogona kudzvanya iyo "Pinda VAD ID" kana Pinda GST ID "kuisa yako VAT / GST ID maererano.Kana iwe ukakanganwa kuisa yako VAT / GST ID mune yako odha, kana iwe unongova neyeti-isingabhadhariswe mutero, ipapo unogona kuodha nemutero wekutengesa. Uye mushure mekunge hurongwa hwabvumidzwa, taura nesu kudzorera mutero.
tenga, GST, urongwa, tenga, mutero wekutengesa, mutero unoregererwa, VAT
Chii chinoitika mushure mekunge ndatumira muhurongwa?Iwe unopa here kudzikisira zvedzidzo?